Cake a3 iphrinta edlayo China Manufacturer
Incazelo:I-A3 iphrinta edlayo,Iphrinta ye-A3 ye-Cake,Isithombe kwiKafesi
Home > Imikhiqizo > Iphrinta yokudla > Iphrinta ye-Cake > Cake a3 iphrinta edlayo
Dala amathuba we-upsell ngokushicilela izithombe ezenziwe ngezifiso ezithunyelwe kusuka kumadivayisi eselula
Dala i-Social Media Buzz Yakha i-buzz yomphakathi ngokwenza wonke ama-beer abizwe ngokufanele
Hlanganisa abathengi Vumela amakhasimende akho ngemibhalo eyakhelwe eceleni, izithombe, noma ngisho nezintandokazi zabo
logo yeqembu lezemidlalo
Kungakhathaliseki ukuthi usuku lokuzalwa olujabulisayo noma Ngiyakuthanda, amakhasimende angakha imiklamo yawo siqu ngokwabo kanye nabangane bawo nge- printer e-3 edlalwayo , futhi bangathumela umyalezo omusha ngekhofi yabo, i-Milkshakes, ama-biscuits, ama-macaroons, ama-paster angempela.
With self yethu ikhekhe a3 printer ungakwazi ukuphrinta kwikhofi bese uphendulela isithombe sakho ngekhofi , ama-milkshakes, ama-biscuits, ama-pastries, ama-macaroons nezinye izinto eziningi ezingaphezulu kokuhlangenwe nakho okungajwayelekile. Yenza i-owm yakho design, isithombe, i-Emoji, Imilayezo kukhofi yakho oyintandokazi, u-milkshakes, ama-Macroons, ama-Biscuites, amaqebelengwane, i-Chocolate ETC.Usebenzisa ubuchwepheshe bokushicilela obunikazi bomshini umshini wenza ukunyathelisa okuphefumulelwe kunoma yisiphi isithombe noma umbhalo odwebeni lwesiphuzo sekhofi. Yakha isikhashana futhi uhlanganise uxhumano namakhasimende akho.
Yenza ikhofi yokuphuza i-foam isiphuzo ngezindlela zakho ezivamile. Beka indebe kwi- Cake a3 iphrinta edlayo , khetha isithombe kusuka kulabhulali yokuqukethwe eningi noma uvumele amakhasimende akho adalwe. Umshini wakho uzongena kumasekhondi nje. Nika isiphuzo sakho ngokuthinta okuphelele.
ikhekhe le-iday elidliwayo kanye ne-macarons printer Xhumana Nanje
Phinda ufake kabusha iphrinta yokudla okuncane Xhumana Nanje
I-A3 iphrinta edlayo Iphrinta ye-A3 ye-Cake Isithombe kwiKafesi Iphrinta yekhofi edlayo Iphrinta yeNkathi edlayo Iphepha lephrinta elidliwayo Iphrinta ye-Printer edlayo I-RFC Jet A3 iphrinta ye-UV